फ्रान्स को पाक कला यात्रा समाचार
यदि त्यहाँ भनाइ छ भने, जहाँ तपाईं जानुहुन्छ जे तपाईं देख्नुहुन्छ, हामी यो पनि भन्न सक्छौं कि तपाई कहाँ जानुहुन्छ के खानुहुन्छ ...? निश्चित! म सँधै जोर दिन्छु कि छुट्टी पनि ग्यास्ट्रोनोमिक बिदा हुनुपर्दछ र यदि तपाईं जाँदै हुनुहुन्छ भने फ्रान्स, राम्रो, धेरै किनभने फ्रेन्च ग्यास्ट्रोनोमी यो संसारमा सबै भन्दा राम्रो एक हो।
फ्रान्सेली पाक चलन के हो? तपाईं के खान सक्नुहुन्छ, कहाँ, कहिले, कुन तरिकामा? आउनुहोस् आज फेला पारौं।
फ्रान्स र यसको खाना
जो कोहीलाई थाहा छ फ्रान्सेली खाना महान छ र धेरै अवस्थामा धेरै परिष्कृत हुन्छन्। यो देशको आकर्षण र यसको पर्यटन टिकटको हिस्सा हो। हामी सबै पेरिसमा माखन र ह्याम स्यान्डविचको साथ वा सीनको किनारमा म्याक्रोनहरू खाएको साथ हिंडेका छौं। वा यस्तै केहि। म सुपरमार्केट को aisles को माध्यम बाट धेरै हिंडेका छु चमत्कारहरु को लागी, म मीठो स्वाद चाखेको छ मौसे चकलेटको र मैले उत्तम नरम चीजहरू किनेको छु ...
यो सत्य हो कि एक पर्यटकको रूपमा, यदि तपाईं सक्नुहुन्छ र चाहनुहुन्छ भने, तपाईं दिनभरि खान सक्नुहुन्छ र हरेक क्षणको फाइदा लिन विभिन्न चीजहरू प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ, तर फ्रान्सेलीहरू क्रियाशील पर्यटक भन्दा कम खाने गर्छन्। वास्तवमा, त्यहाँ सधैं कुराकानी हुन्छ तीन आधारभूत खाना: बिहानको खाजा, खाजा र बेलुका बीचमा केही स्यान्डविचको साथ। मुख्य खानामा मासु, माछा र कुखुराको उपस्थिति महत्त्वपूर्ण छ।
इ European्गल्यान्ड वा जर्मनी जस्ता अन्य यूरोपीय देशहरूको विपरीत बिहानको खाजा हल्का हुन्छ। कुनै सॉसेज, अण्डा, हेम र यति धेरै फ्याट छैन ... कफीको साथ रोटी o टोस्ट वा क्रोइसन्टहरू र त्यसैले तपाईं खाजामा जानुहुन्छ। को नास्ता तपाईं धेरै चाँडो खान, काम वा स्कूल जानु अघि। कुनै पनि खाजामा पकाउन धेरै समय खर्च गर्दैन, यो तातो पेय बनाउने र द्रुत रोटीको साथ केहि बनाउने बारेमा हो।
त्यसपछि को समय आउँछ भोजन, उसलाई छोडधेरै कामहरूमा पूरा घण्टा, जुन सामान्यतया दिउँसो साढे १२ बजे सुरू हुन्छ। यसैले, यदि तपाईं त्यस समयमा शहरको सडकहरूमा हुनुहुन्छ भने तपाईंले बढि व्यक्तिहरू देख्न थाल्नुहुन्छ, टेकअवे फूड स्टोरहरूमा कतारबद्ध भईरहेको छ वा सानो रेस्टुरेन्टमा टेबुलमा बसिरहेको छ। पक्कै पनि अन्य समयमा खाजामा अधिक समर्पण थियो तर आज द्रुत समयहरू विश्वव्यापी छन्।
खाजामा सामान्यतया तीन पाठ्यक्रमहरू सामेल हुन्छन्: स्टार्टर, मुख्य कोर्स र तेस्रो कोर्सको रूपमा या त डेजर्ट वा केही चीज। स्पष्ट रूपमा यो छिटो बिहानको खाजा र खाजाको साथ डिनरको समयमा पुग्न गाह्रो छ जुन तपाईं पछि काम गर्दै जानुहुन्छ, सामान्यतया हल्का पनि हुन्छ। त्यसैले फ्रान्सेलीaमा झर्न सक्छ स्वाद, मध्य-दिउँसो खाजा कफी वा चियाको साथ। विशेष गरी बच्चाहरू, जो यसलाई दिउँसो4देखि प्राप्त गर्न सक्दछन्।
र त्यसपछि, त्यो मध्य अपराह्न खाजा र रातको खाजाको बीचमा, या त घरमा वा काम र घरको बिचमा, यो हुन्छ apéritif। क्लासिक्स औंला खाना दिउँसो7बजे तिर। मेरो लागि सुक्खा फलहरू, विभिन्न चीजहरू र अpes्गुरहरूको साथ चिसो कटौतीको स्वादिष्ट टोके जस्तो केही छैन। मेरो मनपर्ने apéritif।
र त्यसैले हामी आउँछौं बेलुकीको खाना, जुन मेरो स्वादको लागि भन्दा चाँडो देखि यो चुपचाप :7::30० र between बिचको बिच हुन सक्छ, परिवारको तालिकामा निर्भर गर्दै। यो दिनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण खाना हो, परिवार उन्मुख, आराम, कुराकानी र भेट यदि परिवारको कान्छो बच्चाहरू छन् भने तिनीहरूलाई भोजनको अघि र पछाडि खुवाउन सकिन्छ वयस्कहरूको लागि मात्र। वाइन अनुपस्थित हुन सक्दैन।
रेस्टुरेन्टले अन्य घण्टा सञ्चालन गर्दछ, अवश्य पनि, तर तपाईं o'clock बजे खाना खान सक्नुहुन्छ यद्यपि मध्यरातमा बेलुकाको खाना पनि कम्तिमा ठूला शहरहरूमा सम्भव छ। खाजाको समयमा यो त्यस्तो हुँदैन किनकि रेस्टुरेन्टहरू प्रायः खाजा र बेलुकाको खाकाको बीचमा बन्द हुन्छ त्यसैले दिउँसो २ पछि बाहिर खाने योजना गर्नु राम्रो विचार हुनेछैन।
यी फ्रान्सेली पाक शुल्कमा विवरणहरू छन्: फ्रान्सेलीहरूले खाना किन्न, सामग्री किन्न; तिनीहरू घरमा ताजा सामग्रीको साथ धेरै खाना बनाउँदछन्, मेनूको योजना बनाउँदछन् र परिवार वा साथीहरूसँग यसमा रमाउन बस्छन्। कसैले पनि मेसिनबाट केहि चीज किन्ने र यसको छेउमा बसेर खाने कुरा सोच्दैन, वा सिंकको छेउमा स्याउ चाउने, वा भान्साको काउन्टरमा खडा खाने कुरा सोच्दैन।
यो गणना गरिएको भन्दा बढि केहि नसोच्नुहोस् देश भर मा लगभग thousand२,००० बेकरीहरू छन् र करीव १० मिलियन बॅग्युटेट्स प्रति वर्ष बेचिन्छन्।.. फ्रान्सेली रोटीको ठूलो प्रेमी हो र जब पनीर र वाइन जस्ता अन्य साधारण सामग्रीहरूसँग मिलाइन्छ, तिनीहरूसँग अविस्मरणीय भाँडाहरू हुन्छन्।
हामीले भन्यौं कि मासुको तौल छ र त्यसैले यो प्रख्यात जस्तो भाँडामा हो बोउफ बौर्गिन, भेडाको पाउ र पोर्क टुलूज शैली। अन्य मासु कुखुरा र बतख हो, धेरै लोकप्रिय पकवानहरु मा उपस्थित रूपमा डिजन कुखुरा, वाइनको साथ ब्रेज्ड, वा सुन्तला संग बतख, अखरोट वा टुक्रिएको हंसको टर्की जुन क्रिसमस क्लासिक हो।
माछाको सर्तमा हामी यो कुरा बिर्सनु हुँदैन कि फ्रान्समा हजारौं किलोमिटर समुद्री तट रहेको छ, त्यसैले यसले अटलान्टिक र भूमध्यसागरमा महत्त्वपूर्ण माछा मार्ने उद्योग रहेको छ। त्यसैले त्यहाँ छ साल्मन (सालमन एन प्यापिलोट, टूना (प्रोभेन्कल ग्रिल्ट टूना), तरवारफिस Nic la निकोइज वा बर्तनको साथ स्ट्युड झींगा, सिपी, क्लाम र मंकफिस। त्यहाँ लोबस्टरहरू र कस्तूरीहरू पनि छन्।
आँखा त्यो फ्रान्स पनि कफि र सानो कफीको भूमि हो... स्थानीय व्यक्ति क्याफेमा जान र बाहिर बसेर संसारलाई हेर्दै मन पराउछन्। एक्लै वा सँगै, अखबार पढ्ने वा मान्छेहरूको आउने र जानेको अवलोकन गर्नु शताब्दी पुरानो चलन हो।
सत्य यो हो कि त्यहाँ कुनै श is्का छैन कि फ्रान्सेलीहरूले खाना पकाउन र दुई जोश खाने कुरालाई विचार गर्छन् र यसैले, यदि तपाइँ देशभरि घुम्नुभयो भने, तपाइँले उत्कृष्ट क्षेत्रीय भाँडा र धेरै क्षेत्रहरू भेट्टाउनुहुनेछ जुनमा युनेस्कोले आफ्नो ग्यास्ट्रोनोमीहरूलाई मानवता को अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा घोषणा गरेको छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » Getaways यूरोप » फ्रान्स » फ्रान्स को पाक कला
कोल्मार, Alsace को रत्न भ्रमण गर्नुहोस्